हेर्नुहोस मुन्द्रेको कमेडी क्लवको नयाँ भाग, करिस्मा मानन्धर र शान्ता चौधरीको हासो रोकिएन ! (भिडियो)
यो हप्ताको *मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा निकै रमाइलो भएको छ । पछिल्लो समय *मुन्द्रेको कमेडी निकै चर्चामा रहेको छ । हास्यास्पद र नयाँ नयाँ सेलिब्रेटीहरुको आगमनले मुन्द्रेको कमेडी क्लब हेर्न लायक बनेको छ । दिपा श्री प्रमुख अतिथिको रुपमा रहने यश कार्यक्रम जितु नेपाल “मुन्द्रेले” चलाउछन । यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षक फुलन्देकी आमा, अकबरी, लट्टे हुन उनिहरुले पाहुनाका रुपमा आएका सेलिब्रेटी र उपस्थित दर्शक हरुलाई हसाउने गर्दछन । जस मध्ये सबैभन्दा बढी मन पराएका पात्र भने फुलन्देकी आमा हो । आमा अग्नि कुमारी मिडियाबाट सन्चालन हुने कार्यक्रम हेर्नका लागि टिभीमा छुटेका दर्शक युट्युवमा पर्खिएर बसेका हुन्छन ।
यस हप्ताको *मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा भने अहिलेका निकै चर्चित पात्रहरु आउने भएका छन । भर्खरै मात्र एसईई दिएर पास भएका साम्सद शान्ता चौधरी र अभिनेत्री करिस्मा मानन्धर आएका छन । सांसद *शान्ता चौधरी बी ग्रेड ल्याएर एसईई पास, यस वर्ष एसईई परीक्षा दिएकी सांसद शान्ता चौधरीले बी ग्रेड पाएकी छन् । बिहीबार सार्वजनिक भएको नतिजाअनुसार उनले २.६५ जीपीए ल्याएकी छन् । वर्ष परीक्षा दिएकी उनकी छोरीले भने बी प्लस ल्याएकी छन् । आफ्नो छोराले टेलिफोन गरेर नतिजा जानकारी दिएको उनले बताइन् । उनले अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बताएकी छन् ।
अभिनेत्री *करिश्मा मानन्धर बि प्लस ल्याएर एसईई पास,
कति जिपिएले कस्ता विषय पढ्न पाइन्छ ?
व्यवस्थापनमा प्लस टुको पहिलो वर्ष नेपाली, अंग्रेजी, एकाउन्ट, इकोनोमिक्स पढाइन्छ। ऐच्छिक विषयको रूपमा होटल म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडी, कम्प्युटर साइन्स, गणित र ट्राभल एन्ड टुरिजम पर्छन्। त्यस्तै दोस्रो वर्षमा अंग्रेजी, एकाउन्ट, इकोनोमिक्सको पढाइ गराइन्छ र अप्सनलमा बिजनेस म्याथम्याथिक्स, मार्केटिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडी कम्प्युटर साइन्स, गणित, ट्राभल एन्ड टुरिजम पर्दछन्। प्लस टु सकिएपछि ब्याचलरमा अझै विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय छान्न पाउँछन्। बजारको माग बीबीएस, बीबीए, एमबीए, एमबीएस पढेका जनशक्ति तर्फ छ। काठमाडौं भ्याली कलेजका कोअडिनेटर विष्णुप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिलेको ग्लोबल डिमान्ड नै व्यवस्थापन विषयको अध्ययन हो। एसईईमा राम्रै जीपीएस ल्याउनेहरू पनि यो विषयप्रति आकर्षित छन्।’ यसैको फाइदा उठाउँदै कलेजहरू खुलेका छन्। तर कलेजहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विद्यार्थी भ्रममा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
एसईई पास भएपछि विद्यार्थी अन्योलमा हुन्छन्। उनीहरूले सही काउन्सिलिङ पाइरहेका हुँदैनन्। केही विद्यार्थीमात्र आफूले पढ्ने विषयमा परिपक्व हुन्छन्। प्राय: अभिभावक र साथीको सल्लाहमा निर्भर रहन्छन्। ‘यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको इच्छा, भावनालाई बुझ्दै सही परामर्श दिने काम कलेजले गर्नुपर्छ।’ व्यक्तिगत तहबाट परिवार र समाज हुँदै कम्पनी र संस्थासम्म व्यवस्थापकीय सीपको निकै आवश्यक छ। यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू व्यवस्थापनसँगै अनुसन्धान, ह्युमन रिसोर्स व्यवस्थापन तथा विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई बिकाउन सक्छन्।
अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धि भइरहेको छ। बिमा कम्पनीहरू पनि उत्तिकै बढेका छन्। उद्योग कलकारखानाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यस्तोमा व्यवस्थापकीय सीप सिकेका जनशक्तिको माग बढ्दो छ। तर श्रम बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएका कारण चुनौती पनि उत्तिकै छ। यसमा अभिभावक र अनुभवीको सल्लाह सुझावले विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन दिन सक्छ। शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले पनि गुणस्तरीय पठनपाठनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेछ।
विद्यार्थीको आनिबानी, योग्यता र क्षमताबारे अभिभावक अझै जानकार हुन्छन्। त्यसैले छोराछोरीको इच्छाविपरीतका विषय जबर्जस्ती पढ्न लगाउनुहुन्न भन्ने धारणा प्राध्यापकहरूले राख्दै आएका छन्। कलिलो उमेरमा मानसिक तनाव दिँदा विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका उदाहरणहरू धेरै छन्। यस्तो अप्रिय घटनाबाट आफ्नो छोराछोरीलाई बचाउने अभिभारा अभिभावककै हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचि र चहाना आफैं बुझ्नु पर्छ। कक्षा १ देखि १० सम्म पढेको अनुभवका आधारमा मात्र उच्च शिक्षाका लागि विषय छान्ने निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषय सानो वा ठूलो हुँदैन। आफूले रुचाएको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नाले उक्त क्षेत्रमा उत्कृष्ट भएर निस्कन सकिन्छ। विषय छनोट गर्दा भविष्यमा अपनाउने पेसा, त्यसको श्रमबजार तथा आफूले छानेको विषय पढ्न आवश्यक लगानी, समयावधि, आफ्नो आर्थिक क्षमताका विषयमा पनि विद्यार्थीले ध्यान दिन जरुरी छ।
हेर्नुहोस यो हप्ताको मुन्द्रेको कमेडी क्लव,